काठमाडौँका एटीएम : नेपाली पैसा हालेको हेर्ने, भारतीय गिरोह चोर्ने ! - काठमाडौँका एटीएम : नेपाली पैसा हालेको हेर्ने, भारतीय गिरोह चोर्ने !
काठमाडौँका एटीएम : नेपाली पैसा हालेको हेर्ने, भारतीय गिरोह चोर्ने !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २५ भदौ, 05:15:10 PM
काठमाडौं । नक्कली एटीएम कार्ड बनाएर काठमाडौँका विभिन्न एटिएमबाट पैसा चोरी गर्ने भारतीय गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक ३४ वर्षीय जिन्टु जोय, ३२ वर्षीय विकास गोसाईं र २८ वर्षीय बिटु गौतम रहेका छन ।
उनीहरुलाई ठमेलको होटल ओएसिसबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले जानकारी दिए ।
भारतीय गिरोहलाई सहयोग गर्ने केही युवा नेपाली रहेका छन । जसमा दुई जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाली युवाहरुमा काभ्रेका विजय दोङ लामा र काठमाडौंका ३२ वर्षीय अनुज नकर्मी रहेका छन । भारतीय नागरिकलाई एटीएम बक्सको जानकारी र सुरक्षा अवस्थबारे उनीहरुले जानकारी दिने गरेको प्रहरीको भनाई छ ।
आइटीका विशेषज्ञ मानिएका व्यक्ति नै एटीएमबाट अवैध रुपैयाँ निकाल्ने रहेका प्रहरीको भनाई छ । उनीहरुको साथबाट १४ लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
२०७५, २५ भदौ, 05:15:10 PM